Antemoro - Wikipedia
Vehivavy manapatapaka taratasy antemoro ao Ambalavao.
Ny Antemoro na Antaimoro na Temoro dia vondrom-poko ao amin' ny tapany atsimo-atsinanan' i Madagasikara, ao amin' ny faritra Vatovavy-Fitovinanyao amin' ny faritanin' i Fianarantsoa. Nampalaza ny foko antemoro teo amin' ny tantara ny fanoratana ny Sorabe, ny famakiana ny kintana (fanandroana), fandravonana ny disadisa nisy tamin' ireo foko sasany tany atsimon' i Madagasikara. Eo anelanelan' i Namorona sy Manampatrana no faritra onenany. Niisa 500 000 any ho any ny Antemoro tamin' ny taona 2013.
Io foko io dia mitantara ny niaviany tamin' ireo mpanjanaka tonga avy any Somalia tamin' ny taonjato faha-15 na faha-16. Rehefa tonga teto Madagasikara ireo mpanjanaka ireo dia nampiova finoana ny Antemoro ho silamo; tsy ela dia nafoy ny fivavahana noho ny finoana nentim-paharazana sy ny fanao mifandray amin' ny fanajana ny razana, na dia mbola ao anatin' ny fomba amam-panao aza ny sisa amin' ny finoana silamo toy ny fandrarana ny fihinanana henan-kisoa. Tamin' ny taonjato faha-16 dia nisy fanjakana antemoro niorina, nisolo ny fahefan' ny Zafiraminia teo aloha, izay taranaky ny tantsambo ihany koa.
Ny anaran' io foko io dia avy amin' ny teny hoe "morona". Araka ny lovantsofina dia manana fiaviana arabo ny Antemoro. Avy amin' ny anaran' io foko io no niavian' ny anaran' ny taratasy antemoro izay ampiasaina amin' ny fanaingoana. Ny Antemoro no nitondra ny sorabe voalohany teto Madagasikara. I Ramakararo no mpanjaka voalohany tao izay nipetraka tao Ivato, ka antsoina hoe Fenovola ny lapany. Anisan' ny Antemoro nalaza ireo nohafaran' Andrianampoinimerina ho lasa mpanolo-tsainany sy nampianatra an-dRadama I.
Tsy ela dia nanjary nalaza ho ombiasa sy mpanandro mahery vaika ny Antemoro, noho izy ireo nanao ampihimamba ny fahalalana ny sorabe, izay mampiasa ny soratra arabo handikana ny teny malagasy. Nifindra monina nanerana ny Nosy ny ombiasy antemoro, ary tany no nanaovany ny fahaizany ho an'ny fiarahamonina teo an-toerana, nanoro hevitra ny mpanjaka, ary nanangana fanjakana vaovao mihitsy aza. Ity fihetsehan' ny Antemoro ity sy ny famoronana tambazotran' ireo mpanolotsaina ara-panahy matanjaka manerana ny Nosy dia noheverina ho fanerena ny fahatsiarovan-tena eo amin' ny Malagasy amin' ireo vondrom-piarahamonina mihoatra ny azy ary niteraka fahatsapana ny maha-malagasy iraisana. Rava ny fanjakan’ ny Antemoro tamin’ ny faramparan’ ny taonjato faha-19 taorian’ ny fikomian’ ny Antemoro olon-tsotra tamin' ny sarangan' ny andriana.
Ankehitriny ny Antemoro dia mbola mivondrona manodidina ny morontsiraka atsimo-tsinanana, izay mamboly vary sy kafe, mamokatra sira, ary manamboatra ody. Matetika ny Antemoro no mandao ny tanindrazany mandritra ny enim-bolana ka hatramin' ny folo volana ao anatin' ny taona na mihoatra mba hiasa ho toy ny ombiasy manolotra ody sy sikidy ary asa masina hafa. Saika misy ombiasy avokoa ny tanàna rehetra eto Madagasikara, ary maro no ammin' izy ireo no Antemoro mihitsy na efa nankany amin' ny tanindrazan' ny Antemoro mba hahazo fiofanana. Loharanom-bola lehibe iray hafa koa ny famokarana ny taratasy antemoro, taratasy ipetahan' voninkazo izay niraketana ny fahalalana miafina amin’ ny alalan’ ny sorabe, satria mazàna amidy amin’ ny mpizaha tany sy aondrana any ivelany io taratasy io.
1 Ny maha izy azy ny Antemoro
4.2 Fombafomba fandevenana
7 Ireo Antemoro malaza
Ny maha izy azy ny Antemoro[hanova | hanova ny fango]
Ny hoe "Antemoro", amin' ny teny malagasy dia midika hoe "olona amorontsiraka". Any amin’ ny morontsiraka atsimo-atsinanana no misy azy ireo, indrindra eo anelanelan’ i Manakara sy Farafangana. Ny Antemoro dia taranaky ny Silamo izay nanorim-ponenana teto Madagasikara tamin’ ny taonjato faha-14 ary nanambady ny mponina tao an-toerana. Tamin' ny taona 2013 dia tombanana ho 500 000 ny isan' ny Antemoro. Na dia misy aza ny filazana mampifandray azy ireo amin'i Arabia, misy ireo manam-pahaizana hafa milaza fa ireo olona ireo dia azo inoana fa mifandray amin'ny vondrona avy any amin'ny morontsiraka soahily.
Eo anelanelan' ny renirano Namorona sy ny renirano Manampatrana ny faritra misy ny Antemoro. I Vohipeno sy i Manakara no tanàna lehibe any aminy.
Ireto ny foko ao amin' ny vondrom-poko antemoro:
ny Antalaotra-Anakara (izay mizara ho Anakara, Anterotry, Antetsimeto ary Zafimbolajia),
ary ny Vakimandriandry.
Teo anelanelan' ny taonjato faha-12 sy faha-14 no nonina tao amin' ny morontsiraka atsimo-atsinanana ny Antemoro. Mety nonina tao amin' ny faritra Iharana izy ireo alohan' ny hanorenany fonenana aty atsimotsimo kokoa.
Maro ireo sarangam-poko ao amin' ny vondrom-poko antemoro. Ao ny Anteony tonga voalohany tao Matitanana, ao Vohipeno. Ao ny Antalaotra, tonga taty aoriana, nefa malaza amin' ny Sorabe sy ny fahaizany misikidy sy manandro (ny tena mamiratra dia ny Anakara), araka ny lovantsofina, izay voatery nandositra ny lapan' ny soltàna avy any Arabia Saodita fahaizay noho ny fananany fiaviana jiosy. Ao koa ny Ampanabaka izay tsy iza fa ny sarambaben' olona maro anisa.
Tsy tahaka ny foko malagasy hafa ny Antemoro izay nahay diplômasia. Andriamahazonoro, izay Antemoro-Anakara, dia mpanolotsaina manokan' ny mpanjaka merina Andrianampoinimerina sy Radama I, ka anisan' ireo iraka malagasy voalohany nankany London tamin' ny andron' ny mpanjaka britanika William IV.
Ny Antemoro isan'ireo monina vao haingana teto amin'ny nosy Madagasikara. Avy amin’ireo tantsambo silamo izy ireo izay heverina fa tonga any amin’ny morontsiraka atsimo-atsinanana tokony ho tamin’ny 1500 tany ho any. Efa nisy sambo nitondra ireo silamo mpanjanaka tany amin’ny morontsirak’i Madagasikara taloha, saingy nitombo be ny fahatongavan’izy ireo tamin’io fotoana io. Rehefa tonga izy ireo dia nifanena tamin'ny foko Malagasy maro hafa, anisan'izany ny Zafiraminia, izay nanoritsoritra ny fiaviany tany Maka (Lameka) tamin'ny alàlan'ny Afrika Atsinanana, na dia misy manam-pahaizana aza milaza fa tany Somatra no niandohan'ny Zafiraminia ary nanana toerana ambony. teo amin'ny fiaraha-monina malagasy noho ny fahalalana sy ny teknolojia nentiny avy any ampitan-dranomasina, ary nanana ny zo hanao sorona biby ho an'ny razana (sombily), fombafomba mahery sy manan-danja eo amin'ny fiarahamonina malagasy. Ny fomban-drazana am-bava sy an-tsoratra an'ny Antemoro dia mamaritra ny fanirian'izy ireo hiantoka ny fanambadiana eo amin'ny fiaraha-monina roa, saingy nolavin'ny Zafiraminia ireo ezaka ireo. Nipoitra ny fifandonana teo amin’ny roa tonta ho amin’ny fahamboniana, izay lazain’ny tantara am-bava an’ireo vondrona malagasy hafa ho ady eo amin’ny roa goavana. Nivoatra ny fifandirana rehefa tonga ireo Arabo hafa mpanjanaka ary niray tsikombakomba tamin'ireo vao tonga mba ho lasa Antemoro ny tenany.
Manodidina ny taona 1550 teo ho eo dia toa tonga amin’ny kihon-dalana ny fifandonana nihabetsaka tamin’ny niakaran’ny fianakavian’andriana Zafikasimambo teo amin’ny fitondrana tao Matitana taorian’ny fanambadian’ny loham-pianakaviana tamina vehivavy iray teo an-toerana. Ireo soratra ara-tantara dia mampifamatotra ny firafitry ny loham-pianakaviana, Zafikazimambobe, amin’ny Anteony andriana Ramarohala, izay efa nanorim-ponenana tao, fara fahakeliny, telo taranaka talohan’izay. Ny loharanon-tantara hafa anefa dia manamafy fa ny tetiarana voalaza ao amin'ireo lahatsoratra ireo dia tsy marina, ary ny fianakavian'i Zafikazimambo dia vao tonga ary noho izany dia tsy nisy firazanan'ny andriana teo an-toerana. Raha ny tokony ho izy, ireo lahatsoratra ireo dia milaza fa naharitra taranaka telo ny Antemoro mba hidirana am-pahombiazana ao amin'ny fiaraha-monina amin'ny alàlan'ny fanambadiana sy fomba hafa, ary koa maneho ny fahatsiarovan-tena eo amin'ny Antemoro ny maha-zava-dehibe ny fomban-drazana sy ny fomban-drazana eo an-toerana ary ny ilana azy ireo hahita toerana. ao anatin’izy ireo. Rehefa niakatra teo amin'ny fitondrana ny fokon'i Zafikasimambo, dia nandray ny tombontsoa ara-pivavahana nananan'ny foko Zafiraminia teo aloha ary nametraka ny tenany ho ombiasy voalohany nanao fanandroana sy mpanora-dalàna; Niala tsy tapaka ny tanindrazana Antemoro izy ireo mba hanome ny tolotr'izy ireo raha ilaina. Ireo ombiasy ireo ihany koa dia nampiofana matetika ireo mpitarika ara-panahy avy amin'ny vondrom-piarahamonina hafa, izay nanamafy ny maha-lehiben'ny Matitana ombiasy amin'ny maha-tompon'ny fahalalana arcane azy sy ireo ivelan'ny fokony izay nitady hianatra na hanaparitaka izany. Nampiasa ny zony hanao sombily ny Zafikasimambo mba hamolavola sy hifehezana bebe kokoa ny hetsika ara-politika sy ara-toekarena ao amin'ny faritra. Mba hampitsaharana ny ady amin'ny Zafiraminia dia novonoin'izy ireo araka izay azo atao ny lehilahy tao amin'ilay vondrona ary nafindrany tany amin'ny faritra voarara ireo vehivavy sy ankizy. Tamin’izany no nanorenan’izy ireo ny fanjakana Antemoro matanjaka voalohany. Tsy fahita firy izy ireo eo amin’ireo foko Malagasy izay vao tonga nahavita nanangana ny fanjakany tao anatin’ny fotoana fohy taorian’ny nigadonany teto amin’ny nosy.
Teo ambany fitarihan'ny Antemoro Zafikasimambo dia nihena be ny fahalalahan'ny sarambabem-bahoaka ary lasa fototry ny fiainana ara-tsosialy sy ara-politika ny fivavahana. Ny fifandirana teo amin’ny andriana Antemoro sy Zafiraminia ary ny fitondrana Zafikasimambo vokatr’izany dia nametraka fomba fifindra-monina avy amin’iny faritry ny Nosy iny. Tsy toy ny ankabeazan'ny Malagasy izay mikatsaka ny hiverina any amin'ny tanindrazany amin'ny ankapobeny, ny Antemoro tany am-boalohany dia tsy nahatsapa antso toy izany mba hijanonana amin'ny faritra ara-jeografika. Vokany, nivezivezy be ny ombiasy an’ny Antemoro, ny sasany nifindrafindra toerana ary ny sasany nanorim-ponenana maharitra eny amin’ny lapan’ny mpanjaka sy tany an-toeran-kafa. Ny fahalalany manjavozavo momba ny soratra, ny fitsaboana, ny teknolojia ary ny sehatra hafa dia samy nametraka ny lazany ho mpanolotsaina tena ilaina ho an'ny andriana sy ny olon-tsotra, ary nanenika ny nosy manerana ny nosy ny mpanandro izay mamolavola ny fiainana andavanandro. Ny ombiasian'i Matitana dia araka ny voalazan'ny mpahay tantara Bethwell Ogot, ny tambajotran'ny Antemoro ombiasy tsy mitsahatra sy mandehandeha dia tena zava-dehibe tamin'ny fanovana ny fiarahamonina eto Madagasikara avy amin'ny fitambaran'ny foko eto amin' ny Nosy ho any amin'ny vondrom-piarahamonina mijery ivelany manana fahatsiarovan-tena bebe kokoa amin'ny hafa, mitarika ho amin'ny fanitarana ny faritany sy lehibe kokoa, fanjakana sarotra kokoa. Fanampin'izany, ny tantara am-bava dia milaza fa mety nanana razambe nifindra monina niala tamin'ny firenena Antemoro ny mpitondra teo amin'ny Merina sy Tanala ary Antanosy.
Tany am-piandohan'ny taonjato faha-18 dia efa lasa mpanondrana vary sy andevo lehibe ny Antemoro. Nandritra ny taona 1700 dia nifandona tamin’ny Ikongo-Tanala ny Antemoro ka niafara tamin’ny fanafihan-dra Tanala tany amin’ny lemaka amoron-tsiraka atsinanana. Fotoana fohy taorian’izay, dia nisy lehiben’ny Antemoro antsoina hoe Andriamamohotra nanangana firaisankina sy fifandraisana tamin’ny mpanjaka nitondra an’Imerina, Andrianampoinimerina, mba hamerenana indray ny fihavanana.
Ao amin'ny morontsiraka atsimoatsinanan'i Vohipeno sy Manakara no tena ahitana tanàna Antemoro. Nozaraina ho sokajy roa lehibe ny fiaraha-monina: ny mpanombily (na tompomenakely), izay andriana voalaza fa taranaky ny somaliana avy amin’ny foko Dir clan Somali, ary ny menakely, ahitana ny sarangan’ny mpiasa sy ny andevo, izay voalaza fa avy amin’ny foko Somaliana. ny Malagasy eo an-toerana izay nanaiky ny fitondran’ny Somali, na nifandimby tamin’ny andevo nentin’ny Somaliana. Ny mpanombily dia ahitana foko andriana maro toa ny Anakara, Onjatsy, Tsimaito, Antaiony, Antalaotra, Antaisambo, Antaimahazo sy ny hafa. Ireo foko manokana ao anatin'ny fiarahamonina Antemoro ara-tantara dia nanana tombontsoa sy andraikitra miavaka. Natokana ho an'ny foko manokana ny famonoana biby sasany hohanin'ny olona.
Ny mpanjaka Antemoro (Andrianony) dia nofantenana tamin'ny fanapahan-kevitra malaza avy amin'ny foko Anakara, izay nivondrona tany am-boalohany nanodidina ny vavaran'ny reniranon'i Matitanana akaikin'ny tanànan'i Manakara izay miombona amin'ny anarany. Nomena toerana masina ireo mpitondra ireo rehefa voafidy. Nojerena tamim-pitandremana nandritra ny taonjato maro taorian'ny nahafatesan'ny mpitondra ny fady naorin'izy ireo. Ny Anakara no tompon'andraikitra amin'ny fiarovana ireo sampy sy soratra masina Antemoro, niteny fiteny miafina mba hifampitana fahalalana ara-panahy, ary zara raha nanambady an'ireo foko Antemoro hafa. Noheverina fa nifandray tamin'ny ziny sy ny fanahy hafa io foko io ary nalaza ho namokatra mpamosavy sy mpanandro mahery indrindra tao amin'ilay nosy. Hainy ny nanamboatra ody, ny ody ary ny fanazaran-tena amin'ny fampiasana vatosoa eo an-toerana. Mba hitazonana ny fanavahana azy ireo amin'ireo mpikambana hafa ao amin'ny fiaraha-monina Antemoro, dia nipetraka tao amin'ny tanàna voahidy amin'ny fefy hazo misy spikely ny Anakara, izay tsy azon'ny olona idirana raha tsy nahazoana alalana. Vao mainka nampiavaka ny mpitondra ny fady mandrara azy tsy hanao lobaka na satroka.
Ny foko Antemoro tsirairay dia endogamous ary ny fanambadiana ivelan'ny foko dia tena fady. Ireo izay nandika lalàna dia nitomany toy ny maty ary nesorina tanteraka tamin’ny fiaraha-monina.
Ny Antemoro dia mifikitra amin'ny finoana sy fanao ara-panahy nentim-paharazana mahazatra manerana ny nosy, na dia misy foko sy fianakaviana Antemoro samihafa aza dia mampiditra ny lafiny silamo amin'ny ambaratonga samihafa. Matetika izy ireo no manao sy manao ody fiaro izay hanoratana ny andininy ao amin'ny Kor'any amin'ny sorabe. Talohan'ny nidirany ho silamo tamin'ny taonjato fahafito na fahavalo, ireo foko Malagasy izay nanambady an'i Dir taty aoriana ka nahita ny tarana-mpanjaka Antemoro dia monotheista izay nino andriamanitra mpamorona sy fanahy maro izay mpanelanelana eo amin'ny zavamananaina sy ny mpamorona. Tamin'ny fotoan'ny fiovam-po ho amin'ny finoana silamo, dia hadino avokoa ny andriamanitra mpamorona, ary nifantoka bebe kokoa tamin'ireo fanahy izay natsangana ho andriamanitra. Niteraka fiovam-po lehibe ho amin'ny finoana silamo ny fahatongavan'ireo mponin'i Somalis, saingy vetivety dia very ny foto-kevitra fototra ary nanome lalana ho an'ny fanomezam-boninahitra ny razana sy ny fady.
Manamarika mafy ny kolontsaina Antemoro ny Afrika Atsinanana Bantu, Arabo ary Islamika. Tamin'ny fomba nentim-paharazana, ny fitafian'ny lehilahy Antemoro dia ahitana satroka satroka na fez ary akanjo lava mivaha mitovitovy amin'ny fanao any amin'ny faritra maro hafa amin'ny tontolo silamo. Ny volotara harefo dia notenona ho tsihy (tafitsihy) izay nozairina mba ho palitao sy akanjo (miaraka amin'ny tanany lava ho an'ny zokiolona); fehin-kibo vita amin'ny fanto (lamba hodi-kazo nokapohina) no natao teo ambanin'ilay ensemble. Ny vehivavy dia nanao akanjo lava tsy misy tanany vita amin'ny tsihy volotara roa na telo nozairina ary nasiana fehin-kibo teo amin'ny andilany na natao teo ambonin'ny soroka iray. Matetika koa ny vehivavy tanora sy ny olon-dehibe no nanao fehiloha tsihy na akanjo ambony. Voarara ara-tantara ho an'ny vehivavy ny manao lamba lamba vita amin'ny landihazo na fitaovana hafa ankoatra ny tsihy raffia voatenona, satria heverina fa mety hahatonga azy ireo ho manintona kokoa amin'ny lehilahy ivelan'ny fianakaviany, izay voarara ny hanambady azy ireo.
Ny Antemoro dia nalaza manerana ny Nosy ho hany foko namolavola ny sorabe amin'ny teny malagasy, izay nampiasa soratra arabo; io endrika fanoratana io dia nosoloana ny abidy latinina teo ambanin'ny fanjakan'i Merina tamin'ny taonjato faha-19. Ny Antemoro koa dia nalaza be tamin'ny vanim-potoana talohan'ny fanjanahantany ho an'ny mpanandro, izay maminany ny ho avy mifototra amin'ny fizaran'ny volana. Nalaza eran’i Madagasikara izy ireo ary nanao mpanolotsaina teo anivon’ny lapan’ny mpanjaka malagasy maro, anisan’izany ny mpanjaka merina Andrianampoinimerina, izay nanoro hevitra sy nampianatra azy ny sorabe ny mpanandro Antemoro. Ny fomban-drazana pan-Madagascar momba ny ombiasy dia miorim-paka amin'io singan'ny kolontsaina Antemoro io. Ny fampidirana sampy mpanjaka ao amin'ny Fanjakan'Imerina koa dia voalaza fa ombiasy Antemoro.
Ny fady eo amin'ny Antemoro dia avy amin'ny fomban-drazana ary koa avy amin'ny kolontsaina Islamika sy Arabo. Ny fady an'ny Antemoro amin'ny alika ho maloto, na dia mitovy amin'ny finoana silamo aza, dia efa nialoha ny nahatongavan'ny fivavahana tao amin'ilay nosy. Ny fandrarana ny fihinanana henan-kisoa anefa dia niainga tamin'ny fampidirana ny finoana silamo. Araka ny fomban-drazana, ny mpikambana ao amin'ny foko Antemoro nomena dia tsy afaka nihinana afa-tsy tamin'ny foko iray ihany.
Misaona toy izany koa ny fahafatesan’ny olona rehetra eo amin’ny fiaraha-monina, na inona na inona sarangam-piarahamonina. Mandray anjara amin’ny fisaonana mandritra ny herinandro ho an’ny maty ny mpikambana rehetra ao amin’ny vondrom-piarahamonina, ka mandritra izany fotoana izany dia voarara ny hanasa na hisolo akanjo. Amin'ny andro fahavalo dia tapaka ny fotoana fisaonana ary samy mandro sy manao akanjo vaovao ny rehetra. Ny vehivavy mananotena dia tsy maintsy manohy ny fisaonana mandra-pialan'ny ray aman-drenin'ny maty fa vita izany. Mijanona ao an-tranony mandritra ny iray na tapa-bolana ny lehilahy iray maty vady, ary mandritra izany fotoana izany ny ray aman-drenin'ny maty no maniraka vehivavy iray hikarakara azy sy hiaraka aminy.
Ny Antemoro dia miteny fitenim-paritra amin'ny teny malagasy, izay sampan'ny vondrona teny Malayo-polyneziana avy amin'ny teny Barito, ampiasaina any atsimon'i Borneo. Ny soratra sorabe no fomba nanoratana an’io fiteny io, ary antsoina hoe katibo ary heverina ho manana fahefana tsy mahazatra ireo mahafehy io fomba fanoratana io. Ny asa soratr'i Sorabe tamin'ny fomba nentim-paharazana dia avy amin'ny lahatsoratra fampianarana momba ny fanandroana, ka hatramin'ny firaketana ara-tantara sy endrika antontan-taratasy hafa, ary noheverina ho masina ny fitaovana nosoratana tamin'ny sorabe sorabe.
Amin'ireo foko Antemoro samihafa, ireo manampahaizana manokana momba ny fivavahana (indrindra ny Anakara) dia mitahiry sy miteny fiteny miafina antsoina hoe Kalamo. Ny Kalamo dia fiteny arabo izay mampiasa ny morphologie sy syntaxe malagasy izay antsoin'ny mponina hoe kalamon' Antesitesy.
Antemoro maro no miasa ho ombiasy ary mivelona amin'ny fivarotana ny asan'izy ireo amin'ny maha mpanandro, mpamosavy, na mpanao ody mahery; mahazatra ny lehilahy mandeha enim-bolana ka hatramin’ny folo volana ao anatin’ny taona. Miely patrana ny famokarana kafe eto amin’ny tanindrazana Antemoro ary miteraka fidiram-bola ho an’ny fianakaviana maro. Ireo izay manana tany kely na tsy manana tany matetika dia mifindra monina mba hiasa ho mpiasa amin’ny fambolena any avaratra sy andrefana. Ny Antemoro Ampanira fokon'ny Antemoro Ampanira no tena namokatra sy mpivarotra sira an-dranomasina. Ny Antemoro dia malaza amin'ny taratasy vita amin'ny tanana, izay matetika voaravaka amin'ny voninkazo sy ravina vaovao voaporitra. Ny taratasy Antemoro dia vokatra lehibe amidy amin'ny mpizaha tany.
Ireo Antemoro malaza[hanova | hanova ny fango]
Ny taona 1800 ka hatramin’ny 1804 no nananganan’ny ombiasy Antemoro roa, Andriamahazonoro sy Ratsilikaina, ny sekoly ara-dalàna voalohany teto amin’ny Fanjakan' Imerina, izay nampianatra ny ho avin-dRadama I sy ny zaza efatra na dimy namaky teny tamin’ny sorabe, nampiofana azy ireo hanamboatra ranomainty sy ranomainty. taratasy, ary nampianatra azy ireo ny fahaizan'ny fanandroana sy ny sikidy. Andriamahazonoro dia anisan’ireo telo mianadahy, masoivoho voalohany tany Grande-Bretagne sy Maorisy; Maty tamin'ny taona 1838 izy noho ny poizina tangena natao tamin'ny fitsapana tamin'ny fahoriana nandritra ny fitondran'ny mpanjakavavy Ranavalona I.
Ny foko malagasy
Dominique Rolland, "Lois naturelles, lois sociales : l'exemple Antemoro (Madagascar)", in Nouvelle revue d'ethnopsychiatrie, no 14, 1989, p. 107-110
Ferrand, Gabriel (1902). Les musulmans a Madagascar et aux Comores: Troisieme partie - Antankarana, sakalava, migrations arabes. Paris: Ernest Leroux. Retrieved 31 August 2014.
Jacques Dez et François Viré, Le "manuscrit Antaimoro" du fonds arabico-malgache du Musée de l'homme, CNRS, Université Paris-VII, Département de recherches linguistiques, 1984, IV-25 f.- f. de dépl. (avec facsimilé du manuscrit)
Louis Molet, "Quelques contes Makoa et Antaimoro", in Bulletin de l'Académie malgache, nouvelle série, tome XXX, 1951-1952, p. 83-90
Philippe Beaujard et Jean Tsaboto, "Les parias antemoro : les Antevolo", Actes du Colloque international sur l'esclavage, Antanarivo, 23-28 septembre 1996, p. 383-399
↑ Randriamamonjy Frédéric, Tantaran' i Madagasikara isam-paritra, 2006, pp. 206-211.
Hita tao amin'ny "https://mg.wikipedia.org/w/index.php?title=Antemoro&oldid=1044117"
Voaova farany tamin'ny 20 Febroary 2022 amin'ny 14:46 ity pejy ity.